Soomaaliyeey: Isku Tanaasula Si Dooddeenu Kor Ugu Kacdo - Jigjiga Online
HomeSomalidaSoomaaliyeey: Isku Tanaasula Si Dooddeenu Kor Ugu Kacdo
ISKU-TANAASULA, SI DOODEENU KOR UGU KACD.
Ka soomaali ahaa dooda social media aan ka doodayno [halka ay inoo joogto] maaha meel wanaagsan, waa meel aad u uga hooseysa marka loo fiiriyo qoomiyadaha kale ee dhigeena Halka ay ka doodayaan. Waa nasiib daro!!!
Waxaan dhalinta ka CODSANAYAA inay dooda ka soo qaadaan kobtaas hoose, oo isku dayaan inay giitaarka ka garaacaan halka qoomiyadaha kale ka garaacayaan. Waan ogahay inaad u odhan doontaan adigu iska bilow. Sidaa daraadeed, Bal Anigu aan iska bilaabo. Kow aan isku tanaasulno, si aan isku soo dhawaano; Tusaale ahaaan:
ONLF hadii aysan xabad joojin ku dhawaaqi lahayn xilligan kala guurka ah, hal fal oo yar oo ay samayn lahaayeen baa amniga deegaanka qalqal galin lahaa, walibana ciidankoodii, [ha yaraadaan, ama ha badnaadaane’] way soo wada xareeyaan, therefore waxaa la odhan karaa: talaabadaasi waxay qeyb libaaxle ka qaadatay nabad galyada deegaankeena, oo tanaasulka xabadii, waxay deegaankeena ka dhigtay meel nabad galyo ahaan xasiloon. Hadaynaan ku amaani karin, bal yaynaan ku daacayadeen [ aynaan odhan buste ayay la yimaadeen sidii qoxooti camal].
Innakuna ugu yaraan, Bal aan ka tanaasulno dacaayadooda, hadii ay iyaku saas u tanaasuleen, oo [xagaan ka eegi lahayn inay talabaadisi ku qasbanayeen] aan dhan kale ka eegno, waliba dhanka wanaaga intaan ka fiirino, tanaasuladaas [daacayada ah] aan samayno, si la iskugu soo dhawaado. Taasi waxay keeni karta, in doodu kor uga soo kacdo meesha xun ee ay eega dhex rafanayso.
Inteena baraha bulshada [social media ha’] ugu af-dheer ama ugu saamaynta badan, fadlan aan isku dayno inaan jiheyno dooda oo aan cabirka dooda- “QOOMIYAD SOMAALIDA” – ? Halkaas ama cabirkaas keeno ama aan soo gaadhsiino, intaan ka soo jiidno godkan qudhmuun ee ay dhax rafanayso, oo bal EPP da say uga doodayaan qoomiyadaha kale aan isku dayno inaan gaadhsiino dooda social media [Somali social activism debate need to raise their agenda].
Midna ku darsadoo, oo waliba hoosta halaga wada xariiqdo, Itoobiya innakoo qoomiyad ah [SOOMAALI AH] ik baan maanta kaga bixi karnaa xaaladan taagan iyo ta mustaqbalka soo socotaba.
••••••••••Thanks to all of you•••••••
Qalinka: Samatar Amiin Bade (Jigjiga Man)